ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအတွက် စေတမန်: အွန်လိုင်း လူရမ်းကား ဒီမို ဂတုံးများ သိရှိစေရန် ရေးသားသည်
အွန်လိုင်း လူရမ်းကား ဒီမို ဂတုံးများ သိရှိစေရန် ရေးသားသည်
ကျတော်အနေနဲ့ပြောချင်တာများပါတယ်…ဒါပေမဲ့ကျတော့်စကားလုံးတိုင်းကို တန်ဖိုးရှိစေချင်လို့ပါ….အဓိကကတော့ ကျတော်ရဲ့စာနာတတ်တဲ့စိတ်ပေါ့နော်…ဒီစိတ်တွေဟာ ကျတော့်ကိုစာရေးဖို့ တွန်းအားပေးနေတာပါ….အခုဆိုရင် စာဖတ်ပရိသတ်အနေနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာ အဖြေထုတ်လို့ ရပြီ….
ခရစ်ယာန်ဘာသာ၊မွတ်စလင်မ်ဘာသာ၊ဟိန္ဒိူဘာသာတို့ဆိုရင် ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့တံတွေးခွက်ထဲမှာ ပြောချင်သလိုပြော၊ဆိုချင်သလိုဆိုနဲ့ အမ် ဒါအပြစ်မရှိဘူး သူ့တပါးဘာသာတရားကိုစော်ကားလို့ရတယ်ဆဲလို့ရတယ် ဆဲတဲ့သူကဘယ်သူလဲ….????သိပ်အရမ်းကြီးတွေးနေစရာမလိုဘူး ဂတုံးဘုန်းကြီး ဘာဖြစ်လို့လဲ ထမင်းငတ်မှာစိုးလို့ အဖြေကရှင်းတယ်….
အစိုးရကလည်း တားမြစ်မူမရှိဘူး။ဒီမိုကရေစီပါဆိုပြီးအသံကောင်းဟစ်နေတဲ့ ကောင်တွေကလည်းတားမြစ်ခြင်းမရှိဘူး။ အားပေးတယ် တစ်ခါတစ်လေဆိုရင် သူတို့ကိုယ်တိုင်ပါ ဝင်ဆဲကြသေးတယ်…..တကယ်ကောင်းတဲ့ဘာသာတရား…………
ကျတော်မြန်မာ့ဝက်ဆိုဒ်တွေတော်တော်များများ လေ့လာကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာ ဒီမိုကရေစီဆိုပြီးနိူင်ငံတိုးတက်ဖို့အလိုဌါ ကြိုးစားနေပါတယ်လို့ အသံကောင်းဟစ်နေတဲ့အွန်လိုင်းလူရိုင်းကားများပေါ့ သူ့တပါးဖတ်ချင်မှန်းမသိ မဖတ်ချင်မှန်းမသိဘာသာရေးတရားခွေ၊စာအုပ်တွေ ကြော်ငြာထားကြတာ ကျတော်မေးချင်လို့ပါ ဒီမိုကရေစီရအောင် လုပ်မလား လူတိုင်းသူတောင်းစားဂတုံးဖြစ်အောင်လုပ်မလား….
မြန်မာလူမျိုးများရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာ အိန္ဒိယဆီကသူတောင်းစားစိတ်ဓာတ်ကိုရရှိလာတာ ဒီစိတ်ဓာတ်ကို ဒို့မြန်မာ့မြေပေါ်ကနေ ဘယ်လိုပျောက်အောင် ကြိုးစားရမလဲဆိုတာစိတ်မကူးဘူး….. တစ်ခါလာလည်း ဦးသန်းရွှေမကောင်းကြောင်း နှစ်ခါလာလည်းဦးသန်းရွှေမကောင်းကြောင်း တစ်ခါတစ်ခါခင်ဗျာတို့ကိုယ် ခင်ဗျားတို့ပြန်တွေးကြည့်စမ်းပါ ငါ့သာဦးသန်းရွှေလို့ဖြစ်ရင် ဒီထက်ဆိုးနိုင်မလား ဦးသန်းေ၇ွှလိုပဲလားဆိုတာကို ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်တွေးကြစမ်းပါ…
ကျနော်တော့သေသေချာချာပြောရဲတယ် ဒီမိုကရစီပါလို့အသံကောင်းဟစ်နေတဲ့ ဒီမိုဂတုံးလူရမ်းကားများ ဦးသန်းရွှေနေရာကိုရကြည့်စမ်းပါ ဦးသန်းရွှေထက်မဆိုးရင်တောင် ဦးသန်းရွှေလိုပဲ လာမပဲ…. ဘာမှမကြည့်နဲ့လေ ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ဟုတ်မှန်တဲ့အလိမ်အညာလုပ်ကြံဇာတ်များကို ဖော်ထုတ်တဲ့ကျနော့်(ကိုယ်တော်ချော)ကို မုန်းကြတယ်လေ….
မွတ်စလင်မ်ဘာသာကိုစော်ကားတဲ့ဝက်ဆိုက်ဒ်ဆို ကြာလာပြီး ဘာအသံမှ မကြားရဘူး ခရစ်ယာန်ဘာသာကိုစော်ကားတဲ့ဝက်ဆိုက်တွေ ဒီနည်း၎င်းပဲ ဘာအသံမှမကြားရဘူး…
ကျတော်ကဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့မဟုတ်မမှန်တဲ့အလိမ်အညာအားရွှီးဇာတ်လမ်းများကို ဖော်ထုတ်ရေးသားလည်း ရေးသားကော ဒီမိုဂတုံးတွေ နိုင်ငံရေးတောင်မလုပ်နိုင်တော့ဘူး ကျတော့်ဘလော့ဂ်ကို ပုတ်ခတ်ရေးသားကြတာတော့ပဲ…. ဂိုဂယ်(Google) နဲ့တိုင်မယ် ဘလော့ဂ်ဂါဥပဒေနဲ့မညီဘူး ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုပီ ဟိုလေးတကျော်ကျော်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်….
ဘလော့ဂ်ကိုဟတ်ဖို့ ဟတ်ကာတွေဆီမှာ အကူအညီတောင်း ကျတော့်ဘလော့ဂ်ဆို ခဏခဏဟက်ဖို့ ကြိုးစားကြတယ်…. ဟက်ဖို့ကြိုးစားလား မကြိုးစားလားဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သိကြပါတယ်…. မင်းတို့ပတ်စဝေါ့ဒ်မှားရိုက်ပြီး ကြိုးစားတိုင်း ငါ့ဆီကိုအီးမေးလ်လာတယ်ဆိုတာ သိထားပါ….
human right နာမည်နဲ့၊ free thinker နာမည်နဲ့ အောင်မယ်...အောင်မယ် ကျတော့်ကို လာဆုံးမနေတာ….. မွတ်စလင်မ်၊ခရစ်ယာန်ကိုစော်ကားတဲ့ဝက်ဆိုက်ဒ်တွေမှာ ဒီhuman rightတို့ free thinker တို့ ဘယ်ရောက်နေကြပါသလဲ…..
မွတ်စလင်မ်ဘာသာ၊ခရစ်ယာန်ဘာသာကိုစော်ကားတာ human right ဖြစ်ပါသလား???? ဒီမိုကရေစီများတကယ်ရကြည့်စမ်းပါ....
ငါတို့ရဲ့ဗုဒ္ဓလမ်းစဉ်အတိုင်းလျှောက်လှမ်းလို့ ဒီမိုကရေစီရတာပါလို့အသံကောင်းဟစ်ကြအုံးမယ်စိတ်ချ…. ဟုတ်တော့လည်းဟုတ်တာပဲ.....
သမိုင်းကြောင်းကို ပြန်ကြည့်ရရင် ဂေါတာမရှိစဉ်လက်ထက်က အိန္ဒိယမှာ ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်တော့
ဒီဘက်ကဟိန္ဒူဘာသာ အိန္ဒိယပြည်မကြီး(ဗုဒ္ဓဘာသာအခေါ်=ကျည်းကုလား)နဲ့ ဂေါတာမတို့နယ်
(အိန္ဒိယနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ဖက်ရှိ နီပေါနယ်စပ် ကပ္ပိလဝတ် မြို့) က စစ်သည်
(လေထီးစစ်သားမဟုတ်..လေရွှီးစစ်သား) တွေနဲ့ စစ်ဖြစ်ကြကော အိန္ဒိယပြည်မ(ဟိန္ဒိူ)ကနိုင်သွားကော
ဂေါတာမလည်းပါတယ် ယခုလက်ရှိနီပေါနိုင်ငံကနေ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ(သီဟိုဠ်)ကို ထွက်ပြေးရသေးတယ်ဗျား…
(စကားချက် -ဟားဟား သေရမှာကြောက်တဲ့ စောက်ကြောက်ကြီးဂေါတာမ)
ဒီနေရာမှာ ခရစ်ယာန်တို့၏ဘုရား ခရစ်တော်နဲ့ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်တဲ့အခါမှာ သူ့ကိုသတ်မှာသိသိကြီးနဲ့ သေရမှာမကြောက်ဘဲ ဂျေယုဆလင်မြို့ ထဲကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့နဲ့မြည်းလေးကိုစီးပြီးဝင်သွားခဲ့ပါတယ်…..(ကွာခြားမူကိုကြည့်ကြစမ်းပါ)
အခုလည်းဒီအတိုင်းပဲလေ ပြင်ပကိုထွက်ပြေးပြီး အွန်းလိုင်းမ်လေရွှီးစစ်သား တော်လှန်ရေးလုပ်တာမဆိုးပါဘူး ဂေါတာမလိုစောက်ကြောက်ကြီး လမ်းစဉ်ကိုလိုက်သားပဲ….
ဂေါတာမ(ကုလား) လိုပဲ သူ့တပါးဆီကတောင်းစားတတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်လည်း ရရှိလာတာ…. အခုလည်း အနောက်ဥရောပနိုင်ငံတွေ၊အမေ၇ိကန၊်သြစတြေးလျမှာ သူတောင်းစားလိုပဲခိုလုံတာမဟုတ်တာ ဒီလမ်းစဉ်ဟာ ဂေါတာမလမ်းစဉ်ပဲ….. (ဗုဒ္ဓဘာသာကလွဲလို့ တစ်ခြားသောဘာသာများကိုမဆိုလိုပါဘူး တချိုဘာသာဝင်တွေက က့တကယ်ဒုက္ခရောက်လို့ နိုင်ငံခိုလှုံရတာပါ)
ဘာကြောင့်တခြားဘာသာလို့ ပြောရလဲဆိုရင် ချင်းတောင်တန်းမှာ ခရစ်ယာန်များသာရှိတယ်လို့သိရပါတယ်…. ဒီနေရာမှာဇောတိကလိုငနာဂတုံးက တောင်တန်းသာဿနာ့ပြုခေါင်းစဉ်တပ် သေနတ်ခါးကြားထိုးပီ အတင်းအဓမ္မဗုဒ္ဓဘာသာထဲသို့ကူးပြောင်းခိုင်းကြောင်းကို သိရပါတယ်…. ဘုရားရှိခိုးကျောင်းများကို ပိတ်ပင်တားမြစ်မူများ လုပ်လာကြပါတယ်….
အသေခံမလား ဗုဒ္ဓဘာသာထဲကို ဝင်မလားဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုးကိုတိတိကျကျအကောင်အထည်ဖော်လာတယ်… ဒါနဲ့ချင်းလူမျိုးတွေခမျာ ပြင်ပသို့ ထွက်ပြေးရပါတယ်…..
နောက်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဆိုရင်လည်း မွတ်စလင်မ်ဘာသာဝင်များကို တင်းကျပ်စွါအုပ်ချုပ်ထားပါတယ်…. အဖေ၊အမေမှတ်ပုံတင်ရှိသော်လည်း သားသမီးမှာ မှတ်ပုံတင်မရှိခြင်း၊ မွတ်စလင်မ်ဘာသာဝင်ဖြစ်လို့ ခရီးသွားလာခွင့်ကိုပိတ်ပင်ထားခြင်း၊ မွတ်စလင်မ်အထွတ်အမြတ်ထားရာ ဗလီကိုလည်းရစရာမ၇ှိ နှုတ်ဖြင့်သော်၎င်း၊ကိုယ့်တိုင်ကိုယ့်ကျထိရောက်စော်ကားခြင်းများ လုပ်လာကြပါတယ်…..
ဒီလိုနဲ့ဘေးကျပ်နံကျပ်ဖြစ်ရတဲ့ မွတ်စလင်မ်ဘာသာဝင်များဟာ ပြင်ပသို့ထွက်ပြေးပြီး နိုင်ငံခိုလှုံခွင့်တောင်းတာပါ…
Posted by messenger at 10:50 AM
Labels: ဒီမိုဂတုံးများ သိနိုင်စေရန်, မဟုတ်မမှန်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ